Kulankii 17, aad Ee Golaha Kabineega Oo Bilaabmay - Cakaara News
Kulankii 17, aad Ee Golaha Kabineega Oo Bilaabmay
jigjiga( Cakaaranews ) Talaado, 12ka July, 2016. Waxaa hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha kabilaabmay Kulankii 17, aad ee golaha kabineega DDSI ee caadiga ahaa.
Hadaba Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa soo hordhigay golaha kabineega ajandayaasha kulankan 17, aad oo ay kamid ahaayeen: soo jeedinta warbixinta xukuumada DDSI, ansixinta bayaanka miisaaniyada 2009 T.I, ansixinta bayaanka wakaalada kiraynta mashiinada waawayn iyo dayactirka gaadiidka, iyo ansixinta xeernidaamka hanaanka isticmaalka daawooyinka farmasiyada iyo xarumaha caafimaadka.
Kadibna waxaa ladhagaystay warbixintii waxqabadka xukuumada sanadka 2008 T.I. iyadoo gurigu si balaadhan u falanqeeyay warbixinta lasoo jeediyay islamarkaana si dhab ah uga maragkacay in warbixintani kusalaysan tahay qorshihii ay xukuumadu dhigatay oo ay fulinteedana goobjoog iyo qayba ka ahaayeen. Wuxuuna goluhu cadeeyay inay guulo laxaadleh kasoo hoyiyeen dhinacyada horumarka gaar ahaan ‘’biyaha’’ mashaariicihii waa waynaa ee biyo xidheenada, jidadka, dhismayaasha iyo waliba dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, beeraha iyo horumarinta xirfadaha iyo farsamooyinka. Taas oo kutimid kago’naanshaha hogaaminta iyo shacabka oo hal meel ah uwada jeedsaday sida uu rasial wasaaruhuba cadeeyay. Guriga ayaana cod wadajir ah ku ansixiyay inay warbixintani tahay xaqiiqada midhihii qorshaha sanadka 2008 TI.
Waxaa kale oo uu goluhu codbuuxa ku ansixiyay dhamaan ajandayaasha sare ku cad iyo waliba in xafiiska ganacsiga, gaadiidka iyo Arimaha-bulshada laga dhigo hal xafiis oo ka shaqeeya heer degmo meesha heer deegaan ay labo xafiis kala ahaanayaan degmooyinkana uu noqonayo xafiiska ganacsiga, gaadiidka iyo arrimaha bulshada. waxaa iyana la ansixiyay xafiiska shaqada iyo shaqaalaha (CPA) iyo xafiiska kobcinta oo laga dhigay hal xafiis ilaa heer degmo.
Ugudanbayna shirkan golaha kabineega oo la iskulaqaatay qodobadan korka ku xusan ayaa jawi wanaagsan kusoo dhamaaday.